आजको दिनः राशि अनुसार कस्तो रहनेछ ? - TV Annapurna
September 21, 2018 Annapurna TV
वि.सं. २०७५ साल असोज ५ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१८ सेप्टेम्बर २१ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ ञलाथ्व। भाद्र शुक्लपक्ष। तिथि– द्वादशी, २७:०३ बजेउप्रान्त त्रयोदशी।
काममा केही व्यवधान देखिए पनि समुदायको हितमा लोकप्रिय काम गर्न सकिनेछ। समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहनेछ। पदासीन व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ला। नोकरी र व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने समय छ। स्वार्थका लागि साइनो गाँस्नेहरूबाट भने अलि सजग रहनुपर्ला। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपरे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ।
अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थिति आफ्नो अनुकूल नदेखिएकाले सजग रहनुपर्ला। स्वास्थ्यमा कमजोरी र काम रोकिने समस्याले मन खिन्न हुन सक्छ। तापनि हल्लाको पछि नलागी कर्मयोगमा जुट्नुहोला। बिस्तारै शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा फाइदा हुनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट भने जोगिएर काम लिनुहोला। मिहिनेतले दाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ।
कामको चाप बढ्नेछ भने भैपरी आउने समस्याले चिन्ता बढाउन सक्छ। समयमा स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नबन्दा दु:ख पाइनेछ। आकस्मिक खर्च बढ्नाले पनि अभाव अनुभूति हुनेछ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउने हुँदा अलि सजग रहनुपर्ला। बाध्यात्मक परिस्थितिमा अलमलिनुपर्ला। काममा पनि अलि जोखिम उठाउनुपर्ने हुन सक्छ। वादविवादले पनि समस्या निम्त्याउनेछ।
परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। विवादास्पद विषय सुल्झाउने जिम्मेवारी आउन सक्छ। मनोरञ्जनले अलमल्याए पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। समस्याका बीच रमाइलो परिस्थिति सिर्जना गर्न सफल भइनेछ। फाइदाका लागि आफन्तहरू नजिकिने छन्। अतिथिका रूपमा सत्कार प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्नेछ। सबै उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ।
विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै पछि पार्न सकिनेछ। पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम पनि बनाउन सकिनेछ।
स्वास्थ्य कमजोर रहे पनि हिम्मतले काम सम्पादन गर्न सफल भइनेछ। अध्ययनमा धेरै समय दिन नसकिए पनि बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको साथले अप्ठ्यारो स्थिति समेत टर्न सक्छ। गुरुजनको सहयोग र बुद्धिको उपयोगले सफलताको सूत्र पत्ता लगाउन सकिनेछ। दिगो काम सुरुवात हुनेछ।
आत्तिने बानीले काम बिग्रन सक्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुपर्नेछ। महत्त्वाकांक्षाले प्रश्रय पाउने हुँदा सजिलो काम पनि जटिल बन्न सक्छ। विशेष योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउलान्। खराब व्यक्तिको संगतले बुद्धिभ्रम हुन सक्छ। तापनि पहिलेका कमजोरी भने सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि तथा पशुधनबाट लाभ मिल्नेछ।
आज बलको सहाराले पनि धेरै काम बन्नेछन्। परिस्थितिले साथ दिए पनि ईर्ष्या गर्नेहरूले सताउलान्। अग्रजहरूसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। तापनि आफ्नै प्रयासले छोटो समयमा राम्रै उपलब्धि हातलागी हुनेछ। स्रोत-साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ।
बोलीको प्रभावले काम बन्न सक्छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन् भने धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ। अध्ययनमा प्रगति हुनुका साथै व्यावहारिक ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुखद् समाचारले उत्साह जगाउनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ।
चिताएको काम बन्नाले थप अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। दिन लाभदायक र मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीले साथ दिनेछन्। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट होला। पहिरनको सोखले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ। नाम, दाम र इनाम प्राप्त गर्न सकिनेछ।
आकस्मिक समस्याले खर्च बढाउन सक्छ। धेरै मिहिनेत परे पनि थोरैमात्र फल प्राप्त हुनेछ। केही लाभप्रद रकम हातलागी भए पनि बाँकी ऋणभार बढ्ने देखिन्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ। लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ। फाइदाका पछि लाग्दा आफन्त टाढिन सक्छन्। पछिको फाइदाका लागि बलजफ्ती काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि लाभांश अरूका लागि खर्चनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। आफ्नो प्रतिफल हातपार्न पनि केही समय लाग्नेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत भने फेला पर्नेछन्। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सफलता मिल्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले काम अधुरो रहनेछ। तापनि विशेष जिम्मेवारी प्राप्त हुनाले रोकिएका काम बन्नेछन्। (नेपाली पात्रो)
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राकृतिक कारणले गैँडा मर्ने क्रम बढेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले अध्ययनका लागि गठन गरेको...
सरकारी अस्पतालका रुपमा रहेको नुवाकोटको एक मात्र जिल्ला त्रिशूली अस्पताल चिकित्सक र भवनको अभावमा बिरामीको उपचारमा...
वीरगञ्ज। पर्साको सीमावर्ती भारतीय बजार इनर्वातर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्न खोज्दा सोमबार राति प्रहरी चौकी पांडेपुरका...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन यही पुस ११ गते बुधबारका लागि आह्वान गर्नुभएको...
अन्तर प्रदेश समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले सङ्घीय कार्यान्वयन सहजीकरण कार्य योजना तयार पार्दै पुस मसान्तभित्र...
नेपालमा भारतिय नोट प्रतिबन्धले सिमावर्ती क्षेत्रमा मर्का
शम्भू माली, कपिलवस्तु । नेपाल सरकारले भारतिय रुपैयाँ २ सय र २ हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाएसँगै...
झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता बनाउन खोज्ने २ पक्राउ
आलोक यादव, सिरहा । झुठो विवरण पेश गरेर नागरिकता बनाउन खोज्ने २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद्को तेस्रो अधिवेशन आह्वान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । यही पुस ११ गते अपराह्न...
काठमाडौंमा मोनोरेलको डीपीआर तयार गर्न बुधवार चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता हुने
काठमाडौं महानगरपालिकाले मोनोरेल सञ्चालनको विस्तृत प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएको छ ।...
बझाङमा खोटो संकलन गरेर राखेको ठाँउमा भीषण आगलागी
बझाङको भोपुर बजार नजिकै खोटो संकलन गरी राखेको ठाँउमा मंगलबार दिउँसो आगलागी भएको छ । दिब्या...
उखुबारीमा मृत भेटिइन् ७ वर्षीया बालिका, बलात्कार भएको आशंका
धनुसाको उखुबारीमा एक ७ वर्षीय बालिका मृत फेला परेकी छिन् । प्रहरी कार्यालय, ढल्केवरले उनीमाथि बलात्कार...
युवती बलात्कार गर्ने दुइ अभियुक्तलाई १० बर्ष कैद
प्रनिश थापा, चितवन । चितवन जिल्ला अदालतले २३ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा २ अभियुक्तलाई १०÷१०...
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदिप र बिशालको डीएनए कञ्चनपुर पठाइयो, एसपी विष्टविरुद्ध आमाले दिइन् जाहेरी
निर्मला हत्या प्रकरणमा शंकास्पद मानिएका दुई जनाको डीएनए प्रोफाइल कञ्चनपुर पठाइएको छ ।प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान...
भूकम्पपीडितको छाप्रोमा आगलागी, वृद्धको मृत्यु
दोलखा बिगु गाउँपालिकामा गए राति आगलागी हुँदा त्यसमा परेर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु...
विमानस्थलबाट आधा किलो सुनसहित एक जना पक्राउ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी गरेर नेपाल ल्याउदैँ गरेको आधा किलो सुन सहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ...
आगलागीमा परी एक वृद्धको मृत्यु
कतारमा ज्यान गुमाएका गैरेको शव आठ महिना पछि नेपाल आयो
धन कमाउन विदेश गएका चापाकोट नगरपालिका– ७ केवलघारीका ३८ वर्षका गणेश गैरेको शव दुई महिनापछि नेपाल...
नेकपा बैठकः रावलको छुट्टै लिखित दस्तावेज, योगेशको टिप्पणीः काट्दै नकाट्ने हतियार लिएर युद्ध जितिँदैन’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो लिखित सुझाव पेस...
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालय परिसर भित्र रहेको एक भवनमा मंगलबार बिहान आगलागी भएको छ ।...
पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीको अन्त्यष्टि भोली मात्रै
दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरीको अन्त्यष्टि बुधवार मात्रै गरिने भएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार भोलि...
डिजेल तस्करद्वारा प्रहरीमाथि आक्रमण, असईसहित तीन जना घाइते
पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका–१, पाँडेपुरमा तस्करले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेर हतियार खोसेका छन् । आक्रमणमा ३ प्रहरी घाइते...
गैंडाको खाग र कछुवाको खपडासहित धादिङबाट दुई जना पक्राउ
गैंडाको खाग र कछुवाको खपडासहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सामानसहित प्रहरीले धादिङको नीलकण्ठ...
दुई दिन देखि अबरुद्द विद्युत सञ्चालनमा आयो
दुई दिनदेखि अबरुद्द कञ्चनपुरको विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सव–स्टेशनमा सुरक्षागार्डका रुपमा...
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दुख ब्यक्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल...
शव नआउँदा परिवार पीडामा
साउदी अरबको जेद्दा अल्मोराइ कम्पनीमा काम गर्दै आएका राप्तीसोनारी गाउँपालिका–१ कुुसुमका वेदनिधि चापागाईको निधन भएको तीन...
निर्मला हत्या प्रकरणमा तीन दर्जन प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको भन्दै करिब तीन...
विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको पौने १३ करोड खर्च
विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि सरकारसँग ३२ करोड रुपैयाँ माग गरिएकोमा करिब १३ करोड रुपैयाँ निकासा...
अस्पतालमा पत्रकारलाई बीस प्रतिशत छुट
दमौली अस्पताल विकास समितिले जिल्लाका पत्रकारलाई उपचारमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।केही दिनअघि...
पूर्वप्रधानमन्त्री डा‍‍.तुलसी गिरीको निधन
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष डा‍‍. तुलसी गिरीको मंगलबार निधन भएको छ।९३ वर्षिय गिरीको मंगलबार बिहान...
काठमाण्डौँको न्यूनतम तापक्रम बढेर ७ डिग्री पुग्यो तर जाडो नघट्ने
काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम मंगलबार बढेर ७ डिग्रीमा पुगेको छ । सोमबार २।५ डिग्रीमा झरेको काठमाडौँको न्यूनतम...
भत्ताको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन, महानगरपालिकाको बैठक भत्ता मात्रै १ करोड ५८ लाख
एक करोड ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँ। यो कुनै विकास बजेट होइन। काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको वार्षिक...
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्ने, यातना दिने विरुद्ध जाहेरी
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गर्ने र निर्दोषहरुलाई यातना दिने विरुद्ध जिल्ला...
एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा आज फाइनल स्थानका लागि काठमाडौं र ललितपुर भिड्दै
एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटको फाइनल प्रवेशको लागि आज ललितपुर प्याट्रिएटस र काठमाडौं किंग्स इलाभेनबीच प्रतिस्पर्धा...
ज्वाईलाई छोरा बनाई नागरिकता लिन खोज्ने भारतीय नागरिक सहित २ पक्राउ
झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिन खोज्ने भारतीय नागरिकसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।ईलाका...
महन्थ बैकुण्ठ दास बैष्णव १५ लाख धरौटीमा रिहा
आलोक यादव , सिरहा। जनकपुरस्थित रत्नसागर मठका महन्थ बैकुण्ठ दास बैष्णव धरौटीमा रिहा भएका छन्। सरकारी...
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीको भूमिकाउपर छानबिन गर्न गठित समितिले आज प्रहरी महानिरीक्षक...
‘सबै घरमा खानेपानी पुर्याउँछौँ’
प्रदेश नं। ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सबै घरमा खानेपानीपुर्याइने बताएकछन् । छन् ।...
नक्कली नागरिकता बनाउन खोज्ने पक्राउ
महोत्तरीको इलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट भारतीय नागरिकलाई आफ्नो छोरा भनेर नागरिकता दिलाउन लागिएको अवस्थामा प्रहरीले सासू...
कञ्चनपुरमा दुई दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध
विद्युत् सब–स्टेशनका कर्मचारीका आफन्तले शव उठाउन नदिँदा कञ्चनपुरमा दुई दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको छ ।...
दुर्गम गाउँमा टेलिकमका टावर सञ्चालनमा
सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम क्षेत्र पाँचपोखरी थाङ्पालगाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमका दुई टावर सञ्चालनमा आएका छन् । आजदेखि पाँचपोखरी थाङ्पाल–१...
बिहेको प्रलोभन देखाएर १४ वर्षीया बालिका बलात्कार
बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले महोत्तरीमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले...
कोदालोले हिर्काएर छोराले गरे आमाको हत्या
कोदालोले हिर्काएर दैलेखमा छोराले आमाको हत्या गरेका छन्।नारायण नगरपालिका–३ भुर्तीगाउँका २६ वर्षीय बालाराम नेपालीले ४६ वर्षीया...
खोला किनारमै फाल्छन् लोथरवासीले बजारको फोहोर
प्रनिश थापा, चितवन । राप्ती नगरपालिका लोथरवासीले बजारको फोहोर खोलाकिनारमै फाल्ने गरेका छन् । पश्चिम चितवनका...
इन्जिनियरिङ एसोसिएसन निर्वाचनः नेकपा समर्थित प्यानलको कब्जा
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको ३२ औँ कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा समर्थित वामपन्थी प्यानल विजयी भएको छ।...
घोडाघोडीको प्रचार –प्रसारका लागि महोत्सव हुदैँ
विश्व रामसार सुचीमा सुचिकृत कैलाललीको पर्यटकिय क्षेत्र घोडाघोडीको प्रचार प्रसारको लागि महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ...
ठेकेदार कम्पनीद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजना छोडेको घोषणा
इटालियन ठेकदार कम्पनी सीएमसीले निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना छाडेको घोषणा गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि...
टोखामा एक महिलाको हत्या, आरोपमा चार जना पक्राउ
काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–८ मिलनटोलमा एक महिलाको हत्या भएको छ। हत्या आरोपमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी...
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आठ इटालियन कर्मचारी पक्राउ, परियोजना अनिश्चित
काम छाडेर भाग्न लागेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीका आठ कर्मचारीलाई प्रहरीले...
टीकापुर घटनाको सुनुवाइ स्थगित
टीकापुर घट्नासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सोमबारका लागि पेशी चढेको मुद्दा पक्षको कानून व्यावसायीबाट...
सल्यानका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल राज ढकालले सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ ।...
देश भरिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा, सिरहा नगरपालिकामा पनि कामकाज ठप्प
आलोक यादव , सिरहा । सिरहाका १७ वटै स्थानिय तहका कर्मचारीहरु सहित देशैभरका कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको...